“एउटै मञ्चमा ८५ वटा नाटक मञ्चन हुदैछ” : सुवलमणी सापकोटा, अध्यक्ष, सुमेरु कला सरोवर – Merodesh.news
३ जेठ २०७५ May 18, 2018
सुमेरु कला सरोवरको आयोजनामा दश दिन सम्म विराटनगरमा नाटक उत्सव मनाइदैछ । विराटनगर लगायत मोरङका अन्य क्षेत्रहरुका सामुदायिक र निजी विद्यालयका नया कलाकार विद्यार्थीले उत्सवमा सहभागिता जनाउदैछन् । तीन दिनको नाटक कार्यशालामा विद्यालयकाबाट सहभागिता जनाएका विद्यार्थीले तयार पारेको नाटक मञ्चनकालागि विराटनगरको आरोहण गुरुकुलमा जेठ ४ गतेदेखि १३ गते सम्म ‘अन्तर विद्यालय वाइवाई नाटक उत्सव मोरङ २०७५’ आयोजना हुदैछ । नया कलाकारहरु उत्पादन गर्ने उदेश्यका साथ आयोजना गर्न लागिएको उत्सवका बारेमा सुमेरु कला सरोवरका अध्यक्ष सुवलमणी सापकोटास“ग गरिएको सम्वादका सम्पादित अंश यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नाटक उत्सव किन आयोजना गर्न लाग्नु भयो ?
दर्शकको प्रत्यक्ष भावनास“ग खेल्ने माध्ययम ‘नाटक’ हो । नाटकका माध्ययमबाट समाजमा भएका विकृति विसंगतीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । सामाजमा नया कलाकारहरुको उत्पादन हुन सकेको छैन् । कलाकारको जमात पनि सानो छ । सिमित समादयमा रहेको नाटय क्षेत्रलाई ब्यापक बनाउने हाम्रो उदेश्य हो । दुई बर्ष यता ‘कला संस्कृतिको उत्थान नाटक जागरण अभियान’ भन्ने नारा सहित हामी नाट्य क्षेत्रको विकासमा लागेका छौ ।
अभियानमा विद्याथीहरुलाई नै किन रोजियो ?
हामीले कक्षा– ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न स्थानमा तीन दिन सम्मको तालिम दिएर तयार गरेका छौ । भोलीको समाजको अगुवाई गर्ने समुह नै अहिलेका विद्यार्थीहरु हुन् । नाटकका बारेमा धेरै मानिसलाई जानकारी छैन् ।पाठ्य पुस्तकमा पढाइ भएपनि विद्यार्थीले व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गरेका छैनन् । भोलीका दिनमा क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुमा पनि अहिलेका विद्यार्थीहरु पुग्छन् । स्कुल तहबाट नै नाटककाबारेमा जानकारी दियौ भने भोलीका दिनमा नाटक प्रति विद्यार्थीहरुको सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । रंगमञ्चको विकासमा पनि जोड दिनकालागि हामीले अहिले विद्यालय स्तरका भाइबहिनीहरुलाई उत्सावमा सहभागि गराएका छौ ।धेरै विद्यार्थीहरुले रंगमञ्च देख्न पाएका छैनन् । विराटनगरमा सुविधा सम्पन्न रंगमञ्च छ । तर यहा नाटक मञ्चन हुदा दर्शक पाउन मुस्किल पर्छ । हाम्रो उदेश्य नाटक हेर्ने दर्शक बढाउनु पनि हो । विराटनगर कै पनि धेरै विद्यार्थीहरुले रंगमञ्च देख्नु भएको छैन् । उत्सव विद्यार्थीहरुलाई रंगमञ्चमा उपस्थीत भएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर पनि हो ।
उत्सवको तयारी कस्तो हुदैछ ?
जेठ ४ गते देखि दश दिन सम्म हामी विराटनगरको आरोहण गुरुकुलमा नाटक उत्सव आयोजना गर्दैछौ । त्यसकालागि हामी तयारी गरिरहेका छौ । माघ पहिलो साता देखि बैसाख १५ गते सम्म मोरङ जिल्लाका एकसय ७ सामुदायिक र निजी विद्यालयका दुई विद्यार्थी र एक शिक्षकलाई तीन दिनको नाटक कार्यसालामा सहभागिता गराएर नाटक निर्माण गर्न भनेका छौ । तीन दिनको तालिम लिएको विद्यार्थीको समुहले आफ्नो आफ्नो स्कुलमा नाटकको तयारी गर्दैछन् । ४ गतेदेखि १० दिन सम्मको कार्यसालामा सहभागिता जनाएका विद्यार्थीहरुले तयार पारेका नाटक मञ्चन गर्नेछौ । तीन दिनको तालिमबाट सिकेको ज्ञानले विद्यार्थीहरु आफैले कथा लेखन र निर्देशन गरी तयार पारेको बढिमा १५ मिनेट सम्मका नाटकहरु मञ्चन हुनेछ । उत्सवमा सहभागिता जनाएका विद्यार्थीले भोलीका दिनमा समाजका विकृति विसंगती विरुद्ध नाट्कको माध्ययमबाट सचेतना जगाउन सक्छन भन्ने अपेक्षा छ ।
कति स्कुलले सहभागिता जनउने छन् ?
गत बर्ष देखि हामीले नाटक उत्सव मनाउन सुरु गरेका हौ । गतबर्ष सुनसरीमा आयोजना गर्दा ६६ वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरुले नाटक उत्सवमा सहभागिता जनाएका थिए ।यो बर्ष हामी मोरङ जिल्लामा आएका छौ । हामीले १०७ विद्यालयलाई कार्यसालामा सहभागिता जनाएका थियौ । सबै विद्यालयलाई नाटक तयार गर्न आग्रह गरेका पनि छौ । हामी कहा ८५ वटा नाटक मञ्चनगर्नकालागि स्कुलहरुले नाम टिपाएका छन् ।यो उत्सवमा एकसय स्कुलबाट विद्यार्थीहरु आफैले तयार पारेको नाटक मञ्चनकालागि विराटनगरका आरोहण गुरुकुल आउदैछन् । ती विद्यालयहरुलाई दश दिनको सेडुल बनाएर प्रत्येक दिन नया नया नाटक मञ्चन गर्नेछौ ।
उत्सवमा सहभागि विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने के योजना छन् ?
हामीले नाटक उत्सवमा सहभागि विद्यार्थीको उत्साह वृद्धि गर्न पुरस्कार त नभानौ प्रोत्साहन प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौ । सहभागि स्कुलहरु मध्ये हामी उत्कृष्ठ दश विद्यालयको टोली छनोट गरी पुरस्कृत गर्छाै ।त्यस्तै सहभागि मध्येबाट पाच–पाच जना छात्रा–छात्र विद्यार्थी छनोट गर्दै पुरस्कृत गर्ने छौ भने उत्कृष्ठ लेखक र उत्कृष्ठ निर्देशकलाई सम्मान पनि गर्छाै ।